Dhab ahaantii macmiil kasta oo WordPress ah iyo wax kasta oo rajo ah oo aan eegno waxay adeegsadaan Yoast's WordPress SEO plugin si ay u maareeyaan walxaha muhiimka ah ee loogu talagalay hagaajinta mashiinka raadinta. Marka laga soo tago qalabka bilaashka ah, Yoast wuxuu bixiyaa noocyo badan oo takhasus gaar ah sidoo kale.
Waxaan marwalba kahelay Yoast's SEO-ga sheygu inuu fiicanyahay, laakiin waxaa jira dhowr xayawaan xayawaan ah oo aan haysto:
Guddiga maamulka ee 'Yoast SEO' wuxuu leeyahay waayo-aragnimo u gaar ah oo adeegsade ah oo ka duwan khibradda isticmaalaha caadiga ah ee WordPress.
Yoast wuxuu had iyo jeer riixayaa dadka waawayn inay u beddelaan hal ama in ka badan oo ka mid ah fiilooyinkooda lacag bixinta ah. Haye… waxay bixiyeen qalab weyn oo bilaash ah oo si ballaadhan loo adeegsado, markaa waxaan rabaa inaan arko iyaga oo lacag ka dhigaya bixintaas. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood waa xoogaa xoogaa riixitaan fekerkeyga.
The Yoast plugin wuxuu u baahan yahay xoogaa ilo ah oo gaabisey degelkeyga.
Waan ognahay - mobilada iyo raadinta inay muhiim yihiin - inaad lumin karto boqolaal ama xitaa kumanaan booqdayaal ah haddii waqtiyada boggaaga la soo rogo ay ka gaabiyaan tartamayaashaada… markaa xawaaruhu wuxuu ahaa arrinta muhiimka ah aniga.
Xisaabta Xisaabta WordPress SEO Plugin
Saaxiibkay, Lorraine Ball, ayaa xusay Xisaabta SEO plugin waxayna ahayd inaan isla markiiba tijaabiyo. Wakaaladda Lorraine, Wareega, wuxuu dhisaa boggag WordPress ah oo qurux badan oo la awoodi karo oo loogu talagalay tan macaamiisha ah. Waxaan isla markiiba xiiseynayay inaan tijaabiyo kumbuyuutarka oo aan ku rakibo dhowr goobood si aan u arko sida wanaagsan ee ay u sameysay.
Saaxir si uu uga beddelo Yoast SEO Plugin una beddelo Xisaabta Xisaabta waa sahlan tahay. Faa'iidada kale ee plugin waa in aad sidoo kale ku yeelan karto soo dejinta iyo xakamaynta boggaaga dib u habeynta. Waxaan jeclaan lahaa inay u fidiyaan kooxo si ay u habeeyaan jiheyntaada, laakiin dhimista tirada plugins waxay mudan tahay luminta sifadaas.
Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa falanqeeyaha maaddada Rank Math, oo aad ugu fiican SEO-yada inay qoraan oo ay horumariyaan waxyaabaha ku jira ereyada muhiimka ah ee laga yaabo inay bartilmaameedsanayaan:
Darajooyinka Faa'iidooyinka Xisaabta iyo Astaamaha
Si fudud Loola Soco Saaxir Dejiye - Xisaabta xisaabta ficil ahaan lafteeda ayaa isu qaabeysa. Xisaabta Xisaabtu waxay leedahay qaab-tallaabo tallaabo rakibaadda iyo saaxir qaabeynta oo dejiya SEO-ga WordPress oo dhammaystiran. Marka la rakibo, Xisaabta Xisaabtu waxay xaqiijineysaa dejinta boggaaga waxayna kugula talineysaa goobaha ugu habboon ee waxqabadka ugu fiican. Saaxirka tallaabo-tallaabada ah wuxuu dejiyaa SEO-ga boggaaga, astaamaha bulshada, astaamaha webmaster-ka, iyo goobaha kale ee SEO.
Nadiifi & Isdhaafsiga Isticmaalaha Isticmaalaha - Rank Math waxaa loogu talagalay inuu kuugu soo bandhigo macluumaadka saxda ah waqtiga saxda ah. Fududeynta, laakiin awoodda-is-dhexgalka adeegsadaha ayaa muujineysa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan qoraaladaada oo ay weheliso boostada lafteeda. Adoo adeegsanaya macluumaadkan, waad hagaajin kartaa SEO-gaaga boostada isla markiiba. Xisaabta Xisaabta ayaa sidoo kale leh horudhac goos goos ah oo horumarsan. Waad ku eegi kartaa sida boostadaadu uga muuqan doonto SERPs, waxaad ku eegi kartaa goos gooska hodanka ah, oo xitaa waxaad ku eegi kartaa sida qoraalkaagu u ekaan doono markii lagu wadaago warbaahinta bulshada.
Qaabdhismeedka Qaaska ah - Adeegso oo keliya waxa aad rabto oo gab inta ka har. Xisaabta Xisaabta waxaa loo dhisay iyadoo la adeegsanayo qaab-dhismeed qaabaysan si aad awood ugu yeelan karto xakamaynta dhammaystiran ee boggaaga. Dami ama awood u yeelo modules markasta oo aad u baahatid.
Koodhka Lagu Kordhiyay Xawaaraha - Waxaan ka qornay koodhka meel hoose oo aan hubinay in khad kasta oo koodh ahi ujeedo leeyahay. Waxaan ku galnay sannado khibrad ah tan markaa siinta ay u dhaqso badan tahay sida ugu macquulsan ee ay noqon karto.
Waxaa abuuray Dad ka dambeeya MyThemeShop - Iyadoo la adeegsanayo Xisaabta Heerka, waxaad ogtahay inaad ku jirto gacmo wanaagsan. Koodh sameynta iyo dayactirka faylalka wax soo saarka ee 150 + WordPress ah ayaa na baray hal ama labo shay oo ku saabsan sameynta fiilooyin wanaagsan. Iyo, waxaan ku shubnay aqoonteenii oo dhan koodhinta xisaabta Rank.
Taageerada Warshadaha - Waxaan iska ilaalinaa kuweenna. Lagama tagi doono meel sare oo qallalan markaad isticmaasho Xisaabta Darajada. Waxaan ku siinaa waqtiga ugu soo-noqoshada ugu dhaqsaha badan ee weydiimaha taageerada iyo hagaajinta cayayaanka si ka dhaqso badan intaad ka heli karto.
Ka dib markii in ka badan hal sano socday plugin this, Waxaan u cusboonaysiiyay in version lacagta la bixiyo oo u haajireen dhammaan macaamiisha aan u guuray. Waxaan sidoo kale cusbooneysiiyay liiska talobixintayda Qalabka WordPress ee ganacsiga oo leh darajada Xisaabta beddelkeeda Yoast iyo hagidda. Waxaan hubaa inaad arki doonto faa'iidooyinka
Booqo Xisaabta Darajada
Tags: affiliateugu fiican WordPress SEO pluginfalanqaynta contentkeywordsxisaab xisaabeedSEO pluginSitemapsWordPressplugin WordPresswordpress seoxml khariidadaha boggayoast